Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Halako bika tsy tiako tarehy
Inty sy nday: Halako bika tsy tiako tarehy
Isan’ny tranga nahoraka sy naresaka tamin’ity herinandro ity ny nanafoanan’ny Filankevi-panjakana ny didim-panjakana noraisin’ny filohampirenena teo ampivorian’ny Filankevitra ny minisitra ka nanaisorana ny Lehiben’ny fampanoavana eo anivon’ny Fitsarana Tampony, Ranary Rakotonavalona. Noravain’ny Filankevi-panjakana moa io didim-panjakana io ny talata teo satria tsy voahaja ny fepetra nofaritan’ny lalàna momba ny fanaisorana tompon’andraiki-panjakana ambony eo anivon’ny fitsarana toa ireny. Dia miverina mandray ny toerany sy ny asany izany ity Lehiben’ny fampanoavana eo anivon’ny Fitsarana Tampony ity.
Etsy ankilany, ny gazety mpitondra tenin’ny fitondrana Hvm dia mbola mahita resaka indray hoe “raharaha mbola mitohy”.
Amin’ny trangan-javatra toa itony dia tokony mifarana amin’ny fivoahan’ny didim-pitsarana ny ady hevitra momba azy, saingy misy eritreritra ny fitondrana Hvm tsinjo fa itetehan-dry zareo hirosoana any, dia ny hitadiavana lalana hanaisorana an-dRanary Rakotonavalona amin’ny toerany mihitsy. Mety hiverina hanaja ny fepetra nofaritan’ny lalàna ny filohampirenena, ka haka ny hevitra ny Filankevitra ambonin’ny fitsarana (Conseil supérieur de la magistrature=Csm). Ary avy eo dia hamoaka didim-panjakana indray ho fanaisorana azy.
Tsy hoe tsy fanao anefa akory izany fa mety hitranga, saingy amin’izay fotoana izay dia tsy resaka raharaham-pitsarana na resaka teknika intsony no vontoatin’ny fisaina’ny hamoaka an’io didim-panjakana vaovao io fa tena “halako bika tsy tiako tarehy”.
Azo asian-dresaka koa amin’izany ilay hoe “herin’ny raharaha iray efa voatsara” (autorité de la chose jugée).
Noho izany, ny andraikitra pôlitika (responsabilité politique) –n’ingahy Filohampirenena Rajaonarimampianina mihitsy no efa mihozongozona tamin’iny fandravan’ny Filankevi-panjakana ny didim-panjakana noraisiny ka naaisorany an-dRanary Rakotonavalona iny tamin’ny toerany, ka mbola hanam-pahasahiana handray didim-panjakana iray vaovao hafa indray koa ve izy mba hampiharany ny sitra-pony amin’ny fanaisorana an’io lehiben’ny fampanoavana ao amin’ny Fitsarana tampony io?Raha sanatriavin’ny vava ka izany no hataon’Ingahy Filoha dia ny vahoaka mihitsy no hitaky ny fahatsiarovan-tenany hametra-pialana satria efa tsy fanao ianao intsony. Raha ny soatoavina amin’ny fitantanana raharaham-panjakana aza, hoy ny maro, dia iny didim-pitsarana navoakan’ny Filankevi-panjakana nanafoana ny didim-panjakan’ny filohampirenena ankehitriny dia efa tokony handraisany fanapahan-kevitra mametra-pialana.
Izay mana-tsofina aoka izy handre, ary izay manan-tsaina, aoka izy handinika.